Daawo muuqaalka: Kulan ballaaran oo ay ka qeyb galeen Maamulka G/Sh/Dhexe iyo Odayaasha dhaqanka oo maanta ka dhacay Jowhar |
Kulan ballaaran oo uu soo qaban qaabiyay Hey’adda Wada hadalka Bulshada oo ay ka qeyb galeen Maamulka Gobolka Shabellaha Dhexe, Saraakiisha Ciidamada xooga dalka iyo Odayaasha dhaqanka ee heer deegaan ayaa maanta ka dhacay magaalada Jowhar ee Xarunta Gobolka Shabellaha Dhexe.
Kulankan oo looga hadlayay sida dhalinyarada looga wacyi gelin karo in aysan dhalinyarada ku biirin Al-Shabaab, isla markaana aysan qaadan fikradaha qaldan ayaa waxaa Khudbado ka jeediyay mas’uuliyiinta ugu sareysa Maamulka Gobolka Shabellaha Dhexe, saraakiisha iyo Odayaasha dhaqanka.
Gudoomiyaha Gobolka Shabellaha Dhexe Cabdi Jiinow Calasow oo ugu horeyn furay kulanka ayaa ku ammaanay Hey’adda CCD sida ay uga shaqeyso isu keenida bulshada iyo la shaqeynta maamulada dowliga ah, isagoo tilmaamay in fadhigan loogu tala galay in bulshada lagu wacyi geliyo, si looga shaqeynta nabadgelyada.
Sidoo kale Odayaasha dhaqanka ee goobta ka hadlay oo ay ka mid ahaayeen Nabadoon Cali Ibraahim Beesh, Caaqil Yaxye Maxamed Cali iyo C/fataax Macalin ayaa intuba sheegay in odayaasha dhaqanka diyaar u yihiin inay ka qeyb qaataan nabada, wacyi gelinta dhalinyarada iyo dib u soo nooleynta adeegyadii bur buray ee gobolka, iyagoo soo dhoweeyay kulanka ay u qabatay CCD.
Ugu dambeyn Kulankan ayaa noqonaya kii u horeeyay ee odayaasha dhaqanka loogu qabto magaalada Jowhar, tan iyo markii dowladda la wareegtay, waxaana kulankan uu ka qeyb qaadanaya wacyi gelinta iyo horumarinta bulshada qeybaheeda kala duwan.